Wafti ka Socda Ismaamulka Somalida oo Gaalaabaxaya Magaalooyinka ay ku Badan Yihiin Jaaliyadaha Somalida Ogadeeniya ee Dalka Maraykanka. – Rasaasa News
Aug 8, 2010 ethiopia, Jwxo-shiil, Ogaden, ONLF
Hal kudhaga sanadkan Jwxo-shiil “ma doonayo in ay nabad ka dhacdo Ogadeeniya waligeed “BBC.” Wafti balaadhan oo ka yimid Ismaamulka Somalida ayaa si kalsooni leh u mushaaxaya magaalooyinka mataanaha ah ee ay aadka u degan yihiin dadweynaha Somalida Ogadeeniya.
Maaglada Minneapolis, ayaa waxaa degan Jaaliyada ugu badan ee ka soo jeeda dhulka Somalida Ogadeeniya. Jaaliyadaas ayaa waxay xili ahaan jirtay Jaaliyada ugu balaadhan ee taageerta halgankii ay waday Jabhada ONLF. Maanta waxaa muuqata oo marag ma doon ah in Jaaliyadaasi ay aad u xiisaynayso wadahadalada nabada ee u dhaxaysa dawlada iyo ONLF.
Wafti uu horkacayo Cabdi-fataax Sheekh Cabdulahi, gudoomiyaha xisbiga haya talada Ismaamulka Somalida, kana mid ahaa waftigii dalwada uga qayb galay wadahadaldii washington, ayaa socdaal ku maraya magalada Minneapolis.
Waftiga ayaa waxay la kulmayaan Jaaliyada ka soo jeeda Somalida Ogadeeniya ee iyagu degan magaaladaasi. Dadweynaha ayaa aad ugu faraxsan si weyna u soo dhaweeyey waftiga.
Xiliyada qaar ayaan lagu arki karin Minneapolis hal ruux oo ka socda Ismaamulka Somalida Ogadeeniya [kililka 5aad], maantana waxaa ay dadweynuhu ku mashquulsan yihiin sidii ay ula kulmi lahaayeen waftiga.
Arintan ayaa ku tusayasa sida ay uga go,an tahay dadweynaha Somalida Ogadeeniya guddo iyo dibadba soo dhawaynta iyo xiisaha ay u qabaan nabad ka dhalata dhulka Somalida Ogadeeniya.